तेस्रो संक्रमित भेटिएपछि रणनीति बदल्दै सरकार अझै सङ्क्रमण देखिने
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, १२ चैत
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले अहिले अपनाइएको रणनीतिलाई थप मजबुत बनाउँदै लगिने बताए । बुधबार खाडी मुलुकबाट आएका एक जनामा नमूना परीक्षणका क्रममा कोभिड–१९ पोजिटिभ देखिएको हो ।
यसअघि फ्रान्सबाट कतार हुँदै आएकी १९ वर्षीया युवतीमा कोभिड–१९ पोजिटिभ देखिएको हो । उनीहरू दुवैको अहिले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा उपचार भइरहेको छ । यसअघि चीनबाट आएका एक जनामा सङ्क्रमण देखिए पनि उपचारपछि निको भएको थियो ।
‘हिजोसम्म एउटा मात्र केस थियो । उहाँलाई हामीले निको बनाएर पठाएका थियौँ तर अहिले लगातार थप दुई वटा केस देखिन थालेपछि अब हामीले केही रणनीति बनाउनुपर्ने हुन्छ’, डा देवकोटाले भने । उनका अनुसार पहिलो रणनीतिमा अहिले बाहिरबाट मानिसलाई अत्यन्त व्यवस्थित गरेर होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने र त्यसबाट अरूलाई सार्न नदिने तथा क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई केही समस्या परेमा तिनको उपचार सरकारले गर्छ ।
उनले विदेशबाट आएका सबैको परीक्षण गर्न जरुरी छैन भन्दै सबै आआफ्ना घरमा बसे भने सङ्क्रमण फैलिन नपाउने बताए । ‘विदेशबाट आएका सबै न सङ्क्रमित हुनुहुन्छ न त नमूना परीक्षण जरुरी रहेको छ । उनीहरू आफ्नै घरमा एक्लै बसून् भनेर लकडाउन गरिएको हो’, उनले भने, ‘विदेशबाट आएकाको लक्षण देखियो भने आइसोलेशनमा राखेर परीक्षण गर्ने हो ।’
उनले अझै पनि कोभिड–१९ पोजिटिभ देखिन सक्ने बताए । ‘कोभिड–१९ पाजिटिभ देखिन सक्छ भनेर नै हामी तयारी अवस्थामा बस्नका लागि लकडाउन गरिएको हो । देखिएकोलाई सरकारले उपचार गर्ने र बाँकी घरघरमा बस्ने हो’, उनले भने ।
कोभिड–१९ पोजिटिभ बढ्दै गए भने अस्पतालमा तयारीलाई तीव्रता दिइने बताउँदै डा. देवकोटाले अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष थप गरेर संक्रमितको उपचार गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा थप १० सघन उपचार कक्ष निर्माण शुरु गरिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाले कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न केही चुनौतीसमेत रहेको बताए । कतिपय अस्पतालले बिरामीको नमूना नै परीक्षण नगरी फर्काउने (रिफर) गर्ने गरेकाले केही चुनौती थपिएको उनको धारणा थियो । ‘यदि सम्भावित संक्रमित हो भने आइसोलेशनमा राख्नुपर्छ’, उनले भने, 'तर अस्पतालले आइसोलेशनमा नराखेर रिफर गर्ने गरेका छन् । त्यस्तो गर्न मिल्दैन । अस्पतालको आफ्नै आइसोलेशन वार्डमा त्यस्ता सङ्क्रमितलाई राख्नुपर्छ ।’
विश्वव्यापी सामग्रीको संकट भएका बेला व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) केही अस्पतालले आफैँ बनाइरहेको समेत उनले जानकारी दिँदै लुकाइएका सामग्री आफूहरूले खोजी गरिहेको बताए । ‘जे जति छ, त्यो हामीलाई दिनुहोस् । लुकाउन पाइँदैन’, उनले भने, ‘लुकाएको थाहा पाए हामी खोज्छौँ ।’ उनले अपुग सामग्री चीनबाट ल्याउने प्रक्रिया रहेको पनि जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १२, २०७६, ०८:२१:००